နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မကြီးနှင်းဝတ်ရည်သောင်းအဖြစ်ကို ကြားသိရပြီး တစ်ညလုံးငိုခဲ့ရတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း | 9han News
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မကြီးနှင်းဝတ်ရည်သောင်းအဖြစ်ကို ကြားသိရပြီး တစ်ညလုံးငိုခဲ့ရတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း
Admin | March 26, 2020 | Celebrities | No Comments
သရုပ်ဆောင် နှင်းဝတ်ရည်သောင်းဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ရပ်နားပြီးကတည်းက အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့လေးမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ရောဂါဆိုးတွေ တစ်ကမ္ဘာလုံး ရင်ဆိုင်ခံစားနေရချိန်မှာ နှင်းဝတ်ရည်သောင်းဟာ အိမ်မှာမနားနိုင်သေးပဲ ဝမ်းရေးအတွက် အလုပ်လုပ်နေရသေးတဲ့အကြောင်း ညီမဖြစ်သူ အေးဝတ်ရည်သောင်းက ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပြောပြထားပါတယ်။ “ညက မကြီးကVideo call ခေါ်လာတယ်။
ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။ ကိုယ်ကတော့လက်ဖက်ထမင်းသုပ်စားနေတာ။ အလုပ်တွေလည်းနား ဆိုင်တွေလည်းပိတ်ဆိုတော့ အိမ်မှာပဲလုပ်စရာရှိတာလေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့လို့။ မလေးရေနင်ကတော့ အိမ်မှာနေပြီးအလုပ်နားတာတွေတွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်တဲ့။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်တဲ့။ သူတို့ဆီမှာစားသောက်ဆိုင်တွေ ကော်ဖီဆိုင်တွေပိတ်လိုက်ကြပြီတဲ့။
လမ်းတွေမှာလူတွေကိုရှင်းနေတာပဲဆိုပြီး Video call ဖွင့်ပြီးလမ်းတလျောက်လုံး ရိုက်ပြသွားတာ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အထိ ၂ ယောက်လောက်ပဲတွေ့ရတယ်။ လူတွေကိုရှင်းနေရောပဲ။” “ကင်မရာကြီးကိုင်ပြီးလျောက်ပြတာ လှေကားထစ်နားမှာမှာချော်လဲသေးတယ်။ အခုအိမ်နားရောက်ပြီတဲ့ ကိုယ်လည်းပြီးမှ စဉ်းစားမိတယ်။
စကားပြောတာ ၁၀ မိနစ်လောက်ကို သူဘယ်တွေလျောက်သွားနေတာလဲပေါ့။ အဲ့တော့မှမေးလိုက်တော့ အလုပ်ကပြန်လာတာတဲ့။ သူ့အလုပ်ကမပိတ်သေးဘူးတဲ့။ သူမသွားရင်သူလခရမှာမဟုတ်လို့ သူဌေးကအလုပ်ပိတ်ပြီလို့ မကြေငြာမချင်းအလုပ်မသွားပဲမနေသေးဘူးတဲ့။
ကျမတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။” “ခုချိန်အလုပ်လုပ်နေရသူတွေကိုလည်းတကယ်ပဲ ကိုယ်ချင်းစာတယ်။ ကျမတိုနိုင်ငံမှာ ၃ ယောက်တွေ့တာတောင် ကျမအရမ်းကြောက်နေတာ။ သူတို့ဆီမှာထောင်ချီနေပြီတွေ့တာ။ အခုထိအလုပ်သွားနေရတုန်း။ ကင်မရာသူ့ဘက်လှည့်ပြတော့ မကြီး Mask မတပ်ဖူးလားလို့မေးတော့ ဈေးတွေလည်းကြီးပြီး ဝယ်လို့တောင်မရတော့ဘူးတဲ့။
နင်ပို့ပေးပါလားတဲ့။ ကိုယ်မှာအခုပဲသူ့ဆီထပြေးပေးလိုက်ချင်တယ်။ တစ်မိသားစုလုံးကဒီမှာ ဟိုမှာကသူတစ်ယောက်တည်းရယ်။ ရန်ကုန်ပြန်လာတော့လို့ပြောတော့ ဒီကပ်ကြီးပြီးမှပြန်လာမယ်တဲ့.. Wish you all the best Ma Gyi” ဆိုပြီး အစ်မဖြစ်သူအတွက် ဝမ်းနည်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်နေရတဲ့ အစ်မဖြစ်သူ နှင်းဝတ်ရည်သောင်းအတွက် စိုးရိမ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းဝတ်ရည်သောင်းလည်း အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source: Aye Thaung’s fb ယူနီကုဒ်ဖြင့်ဖတ်ရန် သရုပျဆောငျ နှငျးဝတျရညျသောငျးဟာ အနုပညာလုပျငနျးတှေ ရပျနားပွီးကတညျးက အငျ်ဂလနျနိုငျငံ လနျဒနျမွို့လေးမှာ အလုပျလုပျကိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုလို ရောဂါဆိုးတှေ တဈကမ်ဘာလုံး ရငျဆိုငျခံစားနရေခြိနျမှာ နှငျးဝတျရညျသောငျးဟာ အိမျမှာမနားနိုငျသေးပဲ ဝမျးရေးအတှကျ အလုပျလုပျနရေသေးတဲ့အကွောငျး ညီမဖွဈသူ အေးဝတျရညျသောငျးက ဝမျးနညျးစှာနဲ့ ပွောပွထားပါတယျ။ “ညက မကွီးကVideo call ခေါျလာတယျ။ ဘာတှလေုပျနတောလဲ။ ကိုယျကတော့လကျဖကျထမငျးသုပျစားနတော။ အလုပျတှလေညျးနား ဆိုငျတှလေညျးပိတျဆိုတော့ အိမျမှာပဲလုပျစရာရှိတာလေးတှလေုပျတယျပေါ့လို့။ မလေးရနေငျကတော့ အိမျမှာနပွေီးအလုပျနားတာတှတှေေ့ရတော့ဝမျးသာတယျတဲ့။ ကနြျးမာရေးဂရုစိုကျတဲ့။ သူတို့ဆီမှာစားသောကျဆိုငျတှေ ကောျဖီဆိုငျတှပေိတျလိုကျကွပွီတဲ့။ လမျးတှမှောလူတှကေိုရှငျးနတောပဲဆိုပွီး Video call ဖှင့ျပွီးလမျးတလြောကျလုံး ရိုကျပွသှားတာ ၁၀ မိနဈလောကျကွာတဲ့အထိ ၂ ယောကျလောကျပဲတှေ့ရတယျ။ လူတှကေိုရှငျးနရေောပဲ။” “ကငျမရာကွီးကိုငျပွီးလြောကျပွတာ လှကေားထဈနားမှာမှာခြောျလဲသေးတယျ။ အခုအိမျနားရောကျပွီတဲ့ ကိုယျလညျးပွီးမှ စဉျးစားမိတယျ။ စကားပွောတာ ၁၀ မိနဈလောကျကို သူဘယျတှလြေောကျသှားနတောလဲပေါ့။ အဲ့တော့မှမေးလိုကျတော့ အလုပျကပွနျလာတာတဲ့။ သူ့အလုပျကမပိတျသေးဘူးတဲ့။ သူမသှားရငျသူလခရမှာမဟုတျလို့ သူဌေးကအလုပျပိတျပွီလို့ မကွငွောမခငြျးအလုပျမသှားပဲမနသေေးဘူးတဲ့။ ကမြတကယျကိုစိတျမကောငျးဖွဈမိပါတယျ။” “ခုခြိနျအလုပျလုပျနရေသူတှကေိုလညျးတကယျပဲ ကိုယျခငြျးစာတယျ။ ကမြတိုနိုငျငံမှာ ၃ ယောကျတှေ့တာတောငျ ကမြအရမျးကွောကျနတော။ သူတို့ဆီမှာထောငျခြီနပွေီတှေ့တာ။ အခုထိအလုပျသှားနရေတုနျး။ ကငျမရာသူ့ဘကျလှည့ျပွတော့ မကွီး Mask မတပျဖူးလားလို့မေးတော့ ဈေးတှလေညျးကွီးပွီး ဝယျလို့တောငျမရတော့ဘူးတဲ့။ နငျပို့ပေးပါလားတဲ့။ ကိုယျမှာအခုပဲသူ့ဆီထပွေးပေးလိုကျခငြျတယျ။ တဈမိသားစုလုံးကဒီမှာ ဟိုမှာကသူတဈယောကျတညျးရယျ။ ရနျကုနျပွနျလာတော့လို့ပွောတော့ ဒီကပျကွီးပွီးမှပွနျလာမယျတဲ့.. Wish you all the best Ma Gyi” ဆိုပွီး အဈမဖွဈသူအတှကျ ဝမျးနညျးနတော ဖွဈပါတယျ။ အေးဝတျရညျသောငျးကတော့ နိုငျငံရပျခွားမှာ တဈယောကျတညျး ရပျတညျနရေတဲ့ အဈမဖွဈသူ နှငျးဝတျရညျသောငျးအတှကျ စိုးရိမျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ နှငျးဝတျရညျသောငျးလညျး အစစ အရာရာ အဆငျပွပေါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနောျ။
UAB ဘဏ်နဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်တို့ ပူးပေါင်းပြီး Sai Sai Pay app အသစ် မိတ်ဆက်